:: My Little World ::: November 2007
ကျောင်းဖွင့်ချိန် - ရွှေဘုန်းလူ
ဟိုတစ်ရက်က ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ရွှေဘုန်းလူရဲ့ ကျောင်းဖွင့်ချိန် ကဗျာကို Scan ဖတ်ထားတာ မလိုချင်ဘူး၊ PDF ဖိုင်နဲ့မလိုချင်ဘူး၊ မြန်မာစာလုံးတစ်ခုခုနဲ့ရေးထားတာကို လိုချင်ပါတယ်ဆိုလာလို့ကျွန်မ မှာရှိနေတဲ့ ဇော်ဂျီ မြန်မာယူနီကုတ်နဲ့့Typing လုပ်ထားတဲ့ စာသားတွေကို ပေးဖြစ်လိုက်တယ်။ သူ့ လိုပဲ လိုချင်သူတွေ ကူးယူနိုင်အောင် ကျွန်မှာရှိနေတဲ့ ကဗျာရေးပြီးသားကို ဒီမှာ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီမှာမှတ်ထားတော့ မပျောက်တော့ဘူးပေါ့။ Computer ထဲမှာဆို တစ်ခါတလေ ပြန်လိုချင်ရင် အတော် ရှာရခက်တယ်။
ဒီကဗျာက အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ရွှေဘုန်းလူ ခေါ် တာရာမင်းဝေ ရဲ့ နာမည်ကြီး ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ။ အပိုဒ် ၁၀ ပိုဒ်ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီကဗျာမှာ ကျွန်မ အကြိုက်ဆုံးကတော့ နောက်ဆုံး စာပိုဒ် အပိုင် ၁၀ ပါပဲ။
ကဗျာတစ်ပုဒ်လုံးကို ဖတ်ချင်ရင် ကဗျာခေါင်းစဉ်ကို click လုပ်ပါ။
ကျွန်မမှာလည်း ဒီကဗျာကို အင်တာနက် တစ်နေရာမှာ တွေ့ လို့ကူးယူထားလိုက်တာပါ။ ကြာတော့ကြာပြီ။ ဘယ်နေရာကလည်း မမှတ်မိတော့ဘူး။ မူရင်း အပင်ပန်းခံ Typing လုပ်ထားသူကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျောင်းဖွင့်ချိန် - ရွှေဘုန်းလူ ( PDF - Mediafire)
Posted by Nay Nay Naing at 11/30/2007 06:13:00 PM0comments
Myanmar and IS UNITS
အလုပ်က စင်္ကာပူရီးယမ်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကမ္ဘာပေါ်မှာ IS UNITS ( International System Units) တရားဝင် မသုံးတဲ့ နိုင်ငံ ၃ နိုင်ငံပဲရရှိတဲ့ အထဲမှာ နင်တို့ မြန်မာနိုင်ငံပါတယ်၊ ဒီမှာကြည့် ဆိုပြီး ကျွန်မစီ ပို့ ပေးတဲ့ ပုံလေးပါ။ သူ မနေ့ က အင်တာနက်ပေါ်မှာ လျှောက်ကြည့်ရင်း Believe It or Not! ဆိုဒ်မှာ တွေ့ လို့ကျွန်မကို ပြရအောင် သိမ်းထားတာ ဆိုပြီးလည်း ပြောပါသေးတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလိုပဲ IS Units မသုံးတဲ့ တခြား နိုင်ငံနှစ်ခုကတော့ Liberia နဲ့USA ပါ။ အင်တာနက်ပေါ် နည်းနည်းလိုက်ကြည့် လိုက်တော့ ဒီဆိုဒ်ကို လည်း တွေ့ ရတယ်။
အင်တာနက်ပေါ်မှာ အဲ့ဒီအကြောင်း ရေးထားတာ တချို့ ကိုတွေ့ ရတယ်။ ယူအက်စ်က ဘာကြောင့် မသုံးလည်း ဘာလဲဆိုတာတွေ။ ခေါင်းရှုပ်နေလို့လိုက်ဖတ်ရတာ စိတ်မရှည်ဖြစ်နေတယ်။ နောက် အချိန်ရ၊ စိတ်ကြည်လင်မှ ထပ်ပြီး လိုက်ရှာဖတ်ကြည့်အုံးတော့မယ်။
Metrication (Wiki) , The Metric System in the United States
Posted by Nay Nay Naing at 11/30/2007 04:43:00 PM0comments
Looking foraroom to rent..
ဟိုတလောကတင် အိမ်ပြောင်းထားတယ်။ အခုမကြာပါဘူး အိမ်ထပ် ပြောင်းရပြန်အုံးမယ်။ အိမ်ပြောင်းဖို့ အခန်း လိုက်ရှာနေတာ ခုချိန်ထိ မရသေးဖူး။ ခုတလော အဲ့ဒီ အခန်းငှါးဖို့ကိစ္စအတွက် အလုပ်ရှုပ်၊ စိတ်ရှုပ် ဖြစ်နေတာပါ။ စင်္ကာပူရီးယမ်း လူမျိုးခြားတွေအိမ်မှ တစ်ခန်းငှားနေလို့ရတာတွေတော့ တွေ့ ပါတယ်။ အဲ့လိုလည်း မနေချင်လို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် မြန်မာတွေနဲ့ရှယ်နေလို့ ရအောင် အခန်းလိုက်ရှာ နေတာပါ။ ကျွန်မမှာကလည်း ဒီနိုင်ငံမှာ အသိသိပ်မရှိတော့ အပေါင်းအသင်းပေါတဲ့၊ လူသိများတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို အပူကပ်ပြီး၊ အခန်းငှါးဖို့မေးပေးပါ၊ လိုက်ရှာပေးပါ အကူအညီတောင်းထားရ ပါတယ်။ ဒီိကိုလာလေ့ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း အခန်းငှါးဖို့ ရှိတယ် ကြားရင် သတင်းပေးကြပါအုံး။
တော်ရုံနဲ့ကျွန်မစီကို ဘယ်ဧည့်သည်မှ လာလေ့မရှိပါဘူး။ တစ်ယောက်တည်း နေတတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အိမ်မှာ ကျွန်မ ရှိနေရင်တောင် ရှိနေမှန်း မသိအောင် တိတ်တဆိတ်နေတတ် ပါသေးတယ်။ ကွန်ပြူတာနဲ့အင်တာနက် ရှိနေရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မေ့နေတတ်သူတွေကို စာရင်းလိုက် ပြုစုမယ်ဆိုရင်၊ အဲ့ဒီစာရင်းမှာ ထပ်ဆုံးက မဟုတ်တောင် အလယ်လောက်ကတော့ ကျွန်မ ပါလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
လိုချင်တာကတော့ တစ်ယောက်တည်း တစ်ခန်း၊ အဲ့လို အိပ်ခန်း တစ်ခန်းလုံး ရနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ common roomပဲဖြစ်ဖြစ် master room ပဲဖြစ်ဖြစ် ရပါတယ်။ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ရှယ်နေရမလားတောင် မသိတော့ပါဘူး။ ကိုယ်က တစ်ယောက်တည်းနေနေတာ ၇နှစ်ကျော်ပြီးဆိုတော့ ရှယ်နေတယ်ဆို၊ ကိုယ်အချိန်မတော် အိပ်တတ်ပုံ၊ ကွန်ပြူတာသုံးတတ်ပုံတွေနဲ့ အတူ တစ်ခန်းထဲနေတဲ့သူကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်တာပါ။ နေရာကတော့ အခုလက်ရှိ ကျွန်မ အလုပ်လုပ်နေတာက မြို့ လယ်မှာဆိုတော့ ဘယ်နေရာမဆို အမ်အာတီနဲ့နီးရင်၊ သွားလာရလွယ်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
Update: 30 November 2007 :
ဒီနေ့ ပဲ တစ်ခန်းတော့ ယူမယ်ပြောလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာအောင် မနက်ဖြန် နောက်တစ်ခေါက် သွားကြည့်ပြီးမှ သေချာ confirm ဖြစ်မှာ။ အဆင်ပြေရင် ကိစ္စမရှိဘူး၊ အဆင်မပြေရင် တခြားအခန်း ရွေးရကြည့်ရအုံးတော့မယ်။ မြန်မြန်ပြောင်းပြီးမှပဲ အေးမှာ။ ကူညီပေးကြသူအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :)
Update: 28 November 2007
comment က တဆင့် သတင်းပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဖုန်းဆက်၊ အီးမေးပို့သတင်းပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ဆက်သွယ်လိုက်ရှာပေးနေတဲ့ သူငယ်ချင်း အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရှာနေတုန်းပဲ။ ခုထိတော့ အိမ်ခန်းမရသေးဘူး :(
Posted by Nay Nay Naing at 11/27/2007 03:11:00 PM 8 comments
Do you know where Google stores data?
အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်း Google က သူရဲ့ Free Service ဖြစ်တဲ့ Gmail ရဲ့ Storage Size ကို နေ့ စဉ်နဲ့ အမျှ တိုးတိုးပြီး ပေးနေပါတယ်။ Gmail Mail size တစ်နေ့ ဘယ်လောက်တိုးပြီး ရနေသလဲ မသိရင် ကို TAZ ရေးထားတာကို ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလောက် နေ့ စဉ်အမြဲ တိုးပေးနေနိုင်အောင် ဂျီမေးကို ဘယ်နေရာမှာ သိမ်းထားလဲ။ Google ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှု့ ကို သဘောကျသူတွေက Google ရဲ့ Gmail Storage ရှိတဲ့ နေရာကို ဒီလို ပုံလေး ဆွဲပြထားတာ တွေ့မိပါတယ်။
ပုံအကြီးကို ကြည့်ချင်တယ်ဆို အခုအပေါ်က ပုံကို click လုပ်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ပုံအရဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အတွင်းမှာ သိမ်းထားတာတဲ့။ ဟုတ်မှာ။ :D ဒါကြောင့်လည်း တစ်နေ့ ထက် တစ်နေ့Storage Size ကို တိုးပြီး ပေးနေနိုင်တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆို ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ သိမ်းလို့မဆန့် တော့လို့ဟိုးစကြာဝဋ္ဌာကြီးထဲက တွင်းနက်ကြီးတွေထဲမှာ သိမ်းရတော့မယ် ထင်တယ်။ ပုံလေးကို ကြည့်ပြီး သဘောကျလို့မှတ်ထားလိုက်တယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 11/26/2007 03:40:00 PM2comments
Posted by Nay Nay Naing at 11/23/2007 02:37:00 PM2comments
I'm very thankful to you for making me who I am today. I love you much!
Many thanks to all of you for your wishes. You all are the best!!!
Posted by Nay Nay Naing at 11/23/2007 11:01:00 AM0comments
Can't make decisions ?
SEE people ..... FEEL important
DRINK free coffee .. FEEL important
DRAW flowcharts .. FEEL important
EAT free lunch.. FEEL important
FORM subcommittees ... FEEL important
IMPRESS your colleagues .. FEEL important
MAKE meaningless recommendations .. FEEL important
ဒီလေးဖတ်ပြီးမှ အလုပ်မှာ မီတင်... မီတင်.. ဆိုပြီး တချိန်လုံး ဘာကြောင့် ခေါ်နေရသလဲဆိုတာ သိရတော့တယ်။
Thanks SMA for the email..
Source : musicentre.co.uk
Posted by Nay Nay Naing at 11/22/2007 03:45:00 PM3comments
Wishing you haveawonderful birthday and Many More!!
ဒီနေ့တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၁၂ ရက်နေ့ ...
ကျွန်မ့ မေမေ ရဲ့ မွေးနေ့ ...
ဒီနေ့မနက်စောစော အိပ်ရာနိုးတာနဲ့အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး မေမေနဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်။ ကျွန်မ ဖုန်းဆက်တဲ့ အချိန်မှာ မေမေ ဘုရားရှိခိုးနေတုန်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ခနနေရင် အပြင်သွားတော့မှာလို့ ပြောတယ်။ ဒီနေ့ဘာတွေလုပ်မယ် ဆိုတာကိုလည်း ပြောပြပြီး သာဓုခေါ်ဖို့ပြောပါတယ်။ တကယ်ဆို မေမေ့မွေးနေ့ ဟာ အင်္ဂလိပ် ပြက္ခဒိန်အရဆို နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့ ပါ။ အဲ့ဒီနေ့ ကလည်း ကုသိုလ်ကောင်းမှု့ တချို့ ပြုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း မေမေကပြောတယ်။ အရင်နှစ်တွေကဆို မေမေရဲ့ အင်္ဂလိပ်လို့မွေးနေ့ ကိုပဲ ကျွန်မတို့မှတ်ထားပြီး တစ်ခုခု ပြုလုပ်နေကြပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်တော့ မြန်မာလို မွေးနေ့ မှာ မေမေရဲ့ မွေးနေ့ မွေးရက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့ အပြင်၊ သူ့ သမီးဖြစ်သူရဲ့ မွေးနေ့နဲ့ လည်း နီးတာကြောင့် ဒီနေ့ မှ နှစ်ယောက်လုံး အတွက် ပေါင်းပြီး ကုသိုလ်ကောင်းမှု့တွေ လုပ်လိုက်တယ်လို့မေမေကပြောပြတယ်။ သူ့ ရဲ့သမီးမွေးနေ့မှာလည်း ထပ်ပြီး ကုသိုလ်ပြုမှု့တွေ လုပ်အုံးမှာဖြစ်ကြောင်း သတင်းပေးပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီနေ့ ညနေကြရင် အိမ်သားတွေ အတူညစာ စားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆွေမျိုးအိမ်တွေကို စားစရာတချို့ပို့ မယ့် အကြောင်း ကိုပြောတော့ နားထောင်ရင်း ကျွန်မလည်း အိမ်ပြန်ချင်စိတ် ပေါ်သွားမိသေးတယ်။ မေမေ့ကိုတော့ ကျွန်မ ပြန်လာချင်ကြောင်း မပြောဖြစ်လိုက်ပါဘူး။ တော်ကြာ မွေးနေ့မနက်ခင်းမှာ အဝေးရောက်နေတဲ့ သားသမီးတွေအားလုံးကို လွမ်းပြီး မေမေ စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေအုံးမယ်လေ။ ကျွန်မတို့အိမ်မှာက မိသားစုဝင်တွေရဲ့ မွေးနေ့ တွေမှာ မွေးနေ့ ပါတီတွေ ဘာတွေ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် လုပ်လေ့ မရှိပေမယ့်၊ အလှူတချို့ လုပ်လေ့ရှိပြီး၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ဆွမ်းပို့ တာ နဲ့ညနေဆို မိသားစုတွေ အတူတစ်ခုခု ထွက်စားတာမျိုးတော့ နှစ်စဉ်လုပ်လေ့ ရှိပါတယ်။ အင်း.. ဒီလိုမျိုး မွေးနေ့ တွေ မကြုံရတာ အတော်ကြာနေပါပြီ။ မေမေလည်း သူ့ မွေးနေ့ နဲ့သားသမီးတွေရဲ့ မွေးနေ့ တွေမှာ အဝေးမှာ ရောက်နေတဲ့ ကျွန်မတို့ တွေကို သာမန်ထက် ပိုပြီး သတိရနေမှာ သေချာပါတယ်။ တော်ပါသေးတယ်။ ဒီနှစ်မွေးနေ့ မှာ ဖေဖေ အိမ်မှာရှိနေလို့မေမေနဲ့ဖေဖေ အတူတကွ ကုသိုလ်ကောင်းမှု့တွေ ပြုနိုင်ကြတာကြောင့် မေမေ စိတ်ချမ်းသာမှာပါ။ မနှစ်ကဆို ဒီလိုအချိန်မှာ မေမေ့နားမှာ ညီမလေး တစ်ယောက်ပဲ ရှိနေခဲ့တယ်။
ချစ်သော ဖေဖေနဲ့မေမေ အမြဲထာဝရ မခွဲပဲ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် သက်ရှည် ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ကြနိုင်ပါစေ။
Posted by Nay Nay Naing at 11/21/2007 11:23:00 PM2comments
My Sole Wish by Moe Hein
ဒီနေ့မိုးဟိန်း (သားဂျာနယ်ကျော်) ရေးတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်နဲ့စာသားတစ်ချို့ ကို ပြန်ပြီး ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ကဗျာကိုလည်း သဘောကျပါတယ်။ ရေးထားတဲ့ စာတွေကိုလည်း နှစ်သက်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေးအသားကလည်း ပြောစရာမလိုအောင် ကောင်းပါတယ်။
“My Sole Wish”
loving and serving it.
and grow up asatree.
come whatever for.
on this beloved soil.
Forafish, no place is better thanariver. Forabird, no happier can it be than in the woods. For man,aquestion also rises, what is the best? I, for one, would answer “his homeland.” Do I sound patriotic? But that is not the point. It is simplyaman’s love for his soil.
Whenever I travel up or down country,afeeling of gratitude and joy overwhelms me. The fields, things growing, valley or mountain, monuments or houses, people at work, children playing, and etc. …all becomeaquilt. Patterns and colours may differ but the quilt is one piece. Likewise, society and surrounding merge into oneness.
Looking at this oneness of souls and soil, in other words,acountry and its citizens, I am filled with pride. Since days of yore, our ancestors have gone through thick and thin, weal and woe. Times may be good, times may be bad as history will show, but we have not lost our identity. The struggle for the better continues.
AsaBuddhist, and asadevotee, I do believe in “the rounds of birth”. I do not know my past life nor the future. What matters most is the present. Here, in this country, I was born. Here, I have grown up. I have enjoyed all the merits that this country could give. From the time of our forefathers to the present, the shaping and making of this country is the greatest task. With sweat and blood, the noble ones have toiled and sacrificed for this generation and for more to come. We are indebted to them. Beingason of this soil, I must serve so. Out of love and duty, and to the best of my ability, I must do utmost for the land I live in. For me, one life is not enough to fulfill this wish.
Let me be born here again, in Myanmar. I fear not what I have to face. Whatever the odds. So long as I amacitizen breathing its air, quenching my thirst with its water, and living on its produce, I shall be happy. My head and heart will uphold and cherish all the values of the land I am born in. To be among one’s countrymen and serve the land together, is my sole wish. Nothing great, justasimple and strong wish, may I say.
Photo Source : Myanmarventure
Posted by Nay Nay Naing at 11/20/2007 10:30:00 PM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 11/20/2007 01:22:00 PM2comments
Hope you all enjoy yours', ... doing Just what you love to!
အခု အားလပ်ရက်မှာ ဘယ်မှမသွားဖြစ်ပဲ၊ အိမ်က ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ အစားအစာတွေ စားလိုက်၊ အိပ်လိုက်နဲ့အပြည့်အ၀ အနားယူနေပါတယ်။
ကျွေးတော့ မကျွေးပဲ အစားအသောက်ပုံတွေ တင်လိုက်၊ အစားအသောက် အကြောင်းတွေပဲ ရေးလိုက် လုပ်နေတယ် ဖြစ်မှာ စိုးတာနဲ့Hide လုပ်ထားပါတယ်။ သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က Link ကို Click လုပ်ပြီး ဖတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ;)
သောကြာနေ့ ညက အစ်ကိုကြီးကို လေဆိပ်မှာ သွားကြိုတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း သူ့ ပစ္စည်းဘာမှ မပါပဲ အ်ိမ်က ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ အစားအသောက်စရာတွေကို Luggage အကြီးနဲ့ တစ်လုံး အပြည့်သယ်လာ ပေးပါတယ်။ ဘာတွေပါလည်း ဆိုတော့
ထည့်ပေးလိုက်တာတွေ အားလုံး အကြော် တွေကြီးပဲ။ ဒါပဲ ကျွန်မ စားတတ်တာကို၊ တခြားဟာတွေ ထည့်ပေးလည်း စားမှာ မဟုတ်တော့ အမေနဲ့ အဖေက ကျွန်မ စားတတ်တာတွေပဲ ရွေးထည့်ပေးလိုက်တယ် ထင်ပါတယ်။ တချို့ ဟာတွေက ဒီမှာ ၀ယ်ပြီး လုပ်စားလည်းရဆိုတာ သူတို့ လည်းသိနေပေမယ့် သူတို့ သမီးက အစားအသောက်အတွက် အဲဒီလောက် အလုပ်ရှုပ်ခံ၊ ချက်ပြုတ်စားနေမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိလို့ပို့ လို့ ရတိုင်း ပို့ နေတာ ထင်တယ်။ တခြားဟာတော့ လက်ဖက် နည်းနည်းနဲ့နဲ့နှစ်ပြန်ကြော် သုံး၊ လေး ထုတ်ရယ်၊ တိုးတိုး အားလူးအစပ်ကြော်၊ ဖြိုးဓန အားလူးကြော်၊ နေကြာစိလှော်ထုတ် နည်းနည်း နဲ့အုန်းနို့ ခေါက်ဆွဲ တထုတ်၊ မုန့် ဟင်းခါး တစ်ထုတ်၊ မရမ်းသီးငပိကြော် တစ်ထုပ် ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ အိမ်မှ ငါးပိထောင်းဖို့ အချိန်မရလို့ ဆိုပြီး မရွှေမိုး ငပိထောင်း ၂ ဗူးလည်း ပါတယ်။ ကိစ္စတော့ မရှိပါဘူး ကျွန်မမှ ငပိ မကြိုက်တာ။ တကယ်ဆို ငါးပိထောင်း ကြိုက်တာက တစ်ခြား တစ်ယောက်။ နောက်ပြီး မပါမဖြစ် ပုဇွန်ခြောက်တော့ ပါအောင် အမေက ထည့်ပေးလိုက် ပါတယ်။ ပုဇွန်ခြောက်တော့ ကျွန်မ အရမ်းစားတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုဇွန်ခြောက် အရသာ၊ ပုံစံ၊ အရောင်၊ အကောင်ဆိုဒ်တော့ နည်းနည်းရွေးတယ်။ လက်ဖက်ကို ပုဇွန်ခြောက်ပါမှ စားတယ်။ တစ်ခါတလေ ဒီတိုင်းစားတယ်။ ဒီမှာ လက်ဖက်ဝယ်ရပေမယ့် ဒီက၀ယ်လို့ ရတဲ့ ပုဇွန်ခြောက်ကို မကြိုက်ဘူး။ ရက်ဆားနဲ့တခြားဆေးတချို့ လည်း ပါတယ်။ ယောင်းမ ထည့်ပေးလိုက်တာတွေလည်း ရှိသေးတယ်၊ အစားအသောက်ကို ပိုစိတ်ဝင်စားလို့သူထည့်ပေးတာ ဘာတွေလည်း မကြည့်ရသေးဘူး။ဘာစားချင်လည်း အမေမေးတုန်းက အချဉ်ထုတ် နည်းနည်း စားချင်တယ် ပြောလိုက်ပေမယ့် မတည့်ပဲနေမယ် ဆိုပြီး ထည့်မပေးလိုက်ဘူး။ မထည့်ပေးလဲ ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ စားချင်ရင် ဒီကမြန်မာဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်စားလို့ရနေတာပဲလေ။
အခုရက်ပိုင်းတွေမှာတော့ အဲဒီ အစားအသောက်တွေစားရင် မိဘနှစ်ပါးရဲ့ ကျေးဇူး အထူးကြီးမားပါလားလို့တွေးတွေးပြီး အိမ်ကို သတိရနေတော့မှာပါပဲ။ :D
Posted by Nay Nay Naing at 11/18/2007 11:47:00 AM 11 comments
ရှောက်သီးသုတ် နဲ့ကြာဇံဟင်းခါး
ဗိုက်ဆာလို့ကွန်ပြူတာထဲမှာရှိနေတဲ့ စားစရာပုံ တွေကြည့်နေတာ ဒီထဲက လုစားခဲ့ရတဲ့ ရှောက်သီးသုတ်၊ ကြာဇံဟင်းခါး နဲ့ဟို ကြင်စဦး ဇနီးမောင်နှံ အစ်ကိုကြီးနဲ့ မမ စားတဲ့ ဆီချက် ခေါက်ဆွဲနဲ့လက်ဘက်ရည်ကို စားချင်သောက်ချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာတယ်။ နောက်ပိုင်း ရှောက်သီးသုတ်နဲ့ကြာဇံဟင်းခါးကို အကြိမ် အတော်တော်များများ စားဖူးပေမယ့် အဲ့ဒီတစ်ခါ စားသလောက် စားမကောင်းတော့ဘူး။ အဲ့ဒီတုန်းက ကျွေးတဲ့သူတွေက စေတနာကြောင့် စားကောင်းနေတာ ဖြစ်မှာပါ။ ( နောက်တွေ့ တဲ့အခါ ထပ်ဝယ်ကျွေးချင်စိတ် ပေါက်လာအောင် တမင်ရေးတာ မဟုတ်ပေမယ့် ကျွေးမယ်ဆိုတာကို သိနေပါတယ် :D)
Posted by Nay Nay Naing at 11/16/2007 05:59:00 PM9comments
Migrate your domain email address to Google
ကိုယ်ပိုင် Domain နဲ့အီးမေးကိုသုံးလည်း သုံးချင်၊ ကိုယ်တိုင် Maintain လုပ်ရမှာ စိတ်မရှည်၊ အီးမေး အတွက် အကုန်အကျ မခံချင်သူတွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ Information တစ်ခုပါ။ Google Apps Service အကြောင်းကို အတော်များများလည်း သိပြီးရမယ် ထင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာ ကိုယ်ပိုင် Domain ရှိရင် Google Apps မှာ signup လုပ်ပြီး MX records ကို Google ကို point လုပ်လို့ ရတဲ့အကြောင်း နဲ့ဘယ်လို Setup လုပ်ရမယ်၊ ဘာတွေ အားသာချက်တွေရှိတယ် ဆိုတာကို ရေးထားပါတယ်။ အားနည်းချက်တွေနဲ့တခြားသူတွေရဲ့ အမြင်တွေကိုလည်း အဲ့ဒီပိုစ့်က Comments မှာ ဖတ်လို့ ရပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင် Domain Name နဲ့Google Apps ကို သုံးမယ်ဆိုရင် Email အပြင် Google ရဲ့ တခြား serive တွေဖြစ်တဲ့ Google Docs and Spreadsheets, Google Calendar, Google Talk စတာတွေကိုပါ သုံးလို့ ရမှာပါ။ Email အနေနဲ့ ကတော့ Free ပေးတဲ့ Standard Edition မှာ အခု ကျွန်မတို့free သုံးနေတဲ့ Gmail storage size အတိုင်း ရမှာပါ။ Premier Edition ဆိုရင်တော့ 25 G (အခုလက်ရှိ) ရမှာပါ။ Premier Edition ကို သုံးမယ်ဆို user တစ်ယောက်ကို တစ်နှစ်ကို US$50 ပေးရပါ့မယ်။ 24/7 tech support နဲ့ 99.9% uptime guarantee လို့ ဆိုထားတော့ သင့်တင့်တဲ့ဈေးနှုန်းလို့ဆိုရမယ်။ ကုမ္ပဏီအီးမေးကို ကိုယ်ပိုင် email server နဲ့ သုံးတာ ကုမ္ပဏီအကြီးတွေအတွက် ကောင်းပေမယ့် အသေးတွေ အတွက်တော့ မလိုအပ်ဘူး ထင်ပါတယ်။ အလုပ်မှာ email server ပြဿနာတတ်လို့ပို့ မရတာ၊ ဟိုကပို့ လိုက်တာတွေ ရောက်မလာတာ၊ ကိုယ့်ကပို့ တယ် ဒီမှာလည်း အထွက်ပြတယ် ဒါပေမယ့် ဟိုကိုမရောက် .. အမျိုးမျိုးသော ပြဿနာတွေကို ကြုံဖူးရင် ဘယ်လောက်စိတ်ညစ်ရလည်း သိကြမှာပါ။ စိတ်ချရတဲ့ ဒီလို Google က service ကို ၀ယ်သုံးမယ်ဆို Email ပြဿနာတတ်မှာ မပူ ရတော့ဘူးပေါ့။ ရေးရင်း ရေးရင်း Google ကို ကြော်ငြာပေးသလိုတောင် ဖြစ်နေပြီ ထင်ပါတယ်။ :D
ဒါနဲ့Google Apps Premier Edition ဟာ PC World Magazine က ရွေးချယ်တဲ့ The 100 Best Products of 2007 မှာ No. 1 ရထားပါတယ်။ Google Apps မှာ Education Edition ဆိုပြီး လည်းရှိသေးတယ်။ အသေးစိတ် သိချင်ရင်တော့ Google Apps မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Credit to forrestgump from MMGeeks
Google Apps [Wiki] , Google Apps[Google]
Posted by Nay Nay Naing at 11/16/2007 08:11:00 AM0comments
ဒီညနေက အလုပ်မှာ ၂ နာရီ ခွဲ လောက် Knowledge sharing meeting မှာ သွားထိုင်လိုက်ရပြီး သကာလ နောက်ကျိသွားတဲ့ စိတ်တွေကို ပြန်လည် တက်ကြွ မြူးတူး လန်းဆန်း ကြည်လင်လာစေဖို့နားထောင်ဖြစ်လိုက်တဲ့ သီချင်း...
Posted by Nay Nay Naing at 11/15/2007 11:44:00 PM3comments
New websites for Myanmar IT Professionals
ဒီရက်ပိုင်း သူငယ်ချင်းတွေ သတင်းပေးလို့မန်ဘာဝင်ဖြစ်တဲ့ နေရာနှစ်ခု...
A society of Burmese people involved in Science and Technology activities.
ဒီဖိုရမ်ကို ဘဘောကျမိတယ်။ အဲ့ဒီမှာ အခုအချိန်အထိတော့ မန်ဘာသိပ်မများသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း များလာမယ် ထင်ပါတယ်။ မန်ဘာမ၀င်ပဲ ဖတ်လို့ ရတဲ့ ဖိုရမ်တွေကို ဒီတိုင်း ဖတ်လေ့ရှိပေမယ့် ဒီတစ်ခုတော့ မန်ဘာဝင်လိုက်ပါတယ်။ ခုထိတော့ ဘာမှ ၀င်မရေးဖြစ်သေးဘူး။ သူများရေးတာတွေကို လိုက်ပြီး ဖတ်ကြည့်နေတုန်း အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ရေးဖြစ်လာမယ် ထင်ပါတယ်။
Connecting Myanmar / Burma IT Professionals World-Wide
နောက်တစ်ခုက ဒီရက်ပိုင်းမှ စတက်လာတဲ့ Friendster ၊ Facebook တို့ လို Social Network တစ်ခုပါ။ အဲ့ဒီမှာလည်း ဖိုရမ်တစ်ခုရှိတာကို တွေ့ ရတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ ဘယ်လောက်အထိ ပါဝင်ဖြစ်မလဲ မသိသေးပါဘူး။
Labels: Myanmar, Technology, WebSite
Posted by Nay Nay Naing at 11/14/2007 09:25:00 PM5comments
မိုး နှင့် အမ်စီ
မနေ့ ညနက်ပိုင်းကတည်းက ရွာတဲ့မိုး အလုပ်သွားချိန်အထိ သည်းကြီးမည်းကြီး ရွာနေတုန်းပါပဲ။ မိုးတွေ ဒီလောက်တောင် ရွာနေမှတော့ အလုပ်မသွားချင်တော့ဘူး။ ပြန်အိပ်ချင်တဲ့စိတ်၊ ပျင်းနေတဲ့စိတ်ကို အသာထ်ိန်းလို့ရေအမြန်ချိုး၊ ပြင်ဆင်စရာရှိတာ ပြင်ဆင်ပြီး မိုးရွာထဲမှာ အလုပ်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်.. အခန်းတံခါးဖွင့် အထွက်မှာ အိမ်ရှေ့မှာ ထိုင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းက မိုးတော်တော်ရွာနေတယ်၊ အလုပ်သွားမလို့ လား၊ အမ်စီမယူဘူးလားတဲ့။ မယူဘူး၊ အလုပ်သွားလိုက်ဦးမယ် ဆိုတော့ မိုးရွာထဲ အလုပ်သွားလို့ နေမကောင်းရင် ဘယ်သူမှ ဆေးကုပေး၊ ဘယ်သူမှလည်း ဂရုလာစိုက်မှာ မဟုတ်ဘူးနော်လို့သတိပေးတယ်။
အလုပ်အလာ လမ်းမှာတင် sms တစ်ခုရတယ်။ အလုပ်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူ ဒီနေ့အလုပ်မလာဘူး၊ အမ်စီ ဆိုတဲ့အကြောင်း လှမ်းအကြောင်းကြားတာပါ။ အနားယူလိုက်အုံးမယ်တဲ့။ အလုပ်ရောက်တော့ နည်းနည်းနောက်ကျနေပြီ။ ၉း၂၀ လောက် ရှိနေပေမယ့် ကိုယ့်အနားမှာ ထိုင်တဲ့သူတွေ ထဲမှာ ကိုယ်ထက်စောပြီး အလုပ်ရောက်နေတာဆိုလို့တစ်ယောက်ပဲ ရှိကြောင်း တွေ့ လိုက် ရတယ်။ ပရော့ဂျက် မန်နေဂျာက ၃ ပတ် ခွင့်ယူထားတာကြောင့်လည်း ပါမှာပေါ့။ မိုးအေးအေး ချမ်းစိမ့်စိမ့်လေးမို့ရေးနွေးတစ်ခွက် သွားယူသောက်ပြီး ပြန်စရာရှိတဲ့ အီးမေးတွေ ပြန်ပို့ နေတာ၊ ၁၀ ကျော်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်လိုက်တော့ ခုနကတစ်ယောက်ပဲ အနားမှာရှိကြောင်း သတိထားမိလိုက်တယ်။ ဒီအချိန်မှ မရောက်သေးတာ မဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ကျန်တဲ့သူတွေ မီတင်များ သွားနေကြလားလို့မေးကြည့်လိုက်တော့ ဒီနေ့မနက် ဘာမီတင်မှ မရှိပါဘူးတဲ့။ ဒါဆို သေချာပြီပေါ့။ အားလုံး မိုးအေးအေးနဲ့အမ်စီယူပြီး အိမ်မှ ကွေးကုန်ကြပြီ။ ဒီနေ့အလုပ်မှာ ကျွန်မရဲ့ ရှေ့၊ နောက်၊ ဘေးတွေမှာ ထိုင်တဲ့ လူ ၄ ယောက် အပါအ၀င် အမ်စီယူတာ ကျွန်မတို့အဖွဲ့တစ်ခုတည်းကတင် ၆ ယောက် ရှိပါတယ်။
တွေးမိတယ်။ ဒီနေ့ မိုးရွာထဲအလုပ်လာရင် ဘယ်လိုလာလာ မိုးနည်းနည်းတော့မိမှာပဲ၊ ပြီးတော့ ခြေထောက် ရေစိုနဲ့အေးစိမ့်နေတဲ့ အဲယားကွန်းခန်းတွေ ထဲမှာ တစ်နေကုန် အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆို နောက်နေ့ မှ နေမကောင်းဖြစ်ဖို့ က ၈၀% သေချာနေပြီ။ ဒါဆို နောက်တစ်နေ့့ မှာ အမ်စီရတော့မယ်။ တစ်ရက် အမ်စီယူရတာချင်း အတူတူ တစ်နေ့ ကြိုယူလိုက်တော့ လူလည်း မပင်ပန်း ဆေးသောက်စရာမလိုပဲ အနားရတာပေါ့။ အင်း... ဒီနေ့ လို မိုးသည်းကြီးမည်းကြီး ရွာတဲ့ မနက်ခင်းတွေမှာ အလုပ်မသွား၊ အမ်စီ ယူသူများကို အမျှော်အမြင်ကြီးသူများလို့ခေါ်ရမယ်။ အခု အနွေးထည် ထူထူဝတ်ထားပြီး ရေနွေးပူပူတွေ သောက်နေတဲ့ကြားက ချမ်းစိမ့်စိမ့်နဲ့သိပ်ပြီး နေလို့ မကောင်းတော့ဘူး။ မနက်ဖြန်ဆို ဖျားတော့ မလားမသိ။ မဖျားချင်ဘူး။ မိဝေးဖဝေး တစ်ယောက်တည်း နေတဲ့အချိန် ဖျားနာနေရင် ဘယ်လောက် ဒုက္ခရောက်တယ် ဆိုတာ ခံစားဖူးမှ သိကြမှာ။ အင်း... နောက်ဆို မနက်အလုပ်သွားချိန် မိုးရွာရင် အမ်စီယူဖို့စဉ်းစားမှ ဖြစ်တော့မယ်။ ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးတယ် မဟုတ်လား။ ဒီလိုနဲ့ ပဲ ဒီနိုင်ငံမှာ မနက်စောစော အလုပ်သွားချိန် မိုးသည်းကြီးမည်းကြီးရွာရင် အမ်စီယူပြီး အလုပ်မလာကြတာ ထုံးစံတစ်ခုလို ဖြစ်လာတာ ထင်ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 11/14/2007 05:32:00 PM2comments
Browsershots : Cross Browser Testing
Browser တွေအကြောင်း လျှောက်ဖတ်ကြည့်နေရင်း Website တစ်ခုကို တွေ့ တယ်။ အင်တာနက်ပေါ်က Site တစ်ခုကို Different Operation System တွေမှာ Different Browser တွေသုံးပြီး ကြည့်မယ်ဆို ဘယ်လို မြင်ရမလဲဆိုတဲ့ Screenshot ပုံတွေ ထုတ်ပေးတဲ့ Website ပါ။ Website ရေးတဲ့သူတွေအတွက် အသုံးဝယ်မယ့် ဆိုဒ်တစ်ခုပါပဲ။ ဘလော့ရေးသူတွေ အတွက်လည်း အသုံးဝင်မယ်။ ကိုယ့် ဘလော့လေး Template ပြောင်းပြီးရင် တခြား Browser တွေနဲ့အဆင်ပြေပြေ မြင်ရပါ့မလားဆိုတာကို အရင်ကလို တစ်ခုချင်း လိုက်စမ်းနေစရာ မလိုတော့ပဲ၊ ဒီဆိုဒ်လေး သုံးပြီး လွယ်လွယ်ကူကူ စမ်းသပ်နိုင်သွားတာပေါ့။
တကယ်ဆို Website တွေ၊ Web Application တွေရေးတဲ့အခါ Cross Platform Browser Independent ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဟိုးအရင်ကဆို Website အတော်များများက ဘယ် Browser, ဘယ် version ကိုသုံးမှ ကြည့်လို့ရမယ် ဆိုတာမျိုး အမြဲတွေ့ရတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ အရင်ကထက် စာရင်တော့ အင်တာနက်ပေါ်က websites တွေဟာ Browser Independent လာတာကို တွေ့ ရတယ်။
ကျွန်မ ဘလော့ကို စမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ ကျန်တဲ့ Browser တွေမှာ မြန်မာစာလုံးမရှိရင်မမြင်ရတာကလွဲရင် တခြားဟာတွေ အဆင်ပြေပေမယ့် safari နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတာတွေ့ ရတယ်။ အရင်တခါ safari နဲ့စမ်းတုန်းက အဆင်ပြေပြေ မြင်ရပါတယ်။ အခု အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ ဒီကြားထဲ ပြင်လိုက်တဲ့ Code တွေမှာ ဘာတွေမှားသွားလဲ မသိဘူး။ အခုတော့ မပြင်အားသေးလို့ ဒီတိုင်းပဲ ထားလိုက်ဦးမယ်။ safari နဲ့ကျွန်မ ဘလော့ကို ကြည့်တဲ့သူလည်း သိပ်ရှိမယ်လဲ မထင်ဘူးလေ။ နောက် အားတဲ့ တစ်ရက်ကြမှပဲ ပြန်စမ်းပြီး ပြင်ကြည့်တော့မယ်။
Websites overview for naynaynaing.blogspot.com
ဒါနဲ့Webpage တွေကို Screen Size အလိုက် Test လုပ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Anybrowser က ScreenSizeTest Page ကို သုံးပြီးလည်း လွယ်လွယ်ကူကူ စမ်းကြည့်လို့ ရပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 11/13/2007 03:34:00 PM0comments
အလုပ်များတဲ့ နေ့ တစ်နေ့ .. 12 November 2007
အလုပ်ရောက်တာနဲ့UAT ၀င်မရဘူး ဆိုတဲ့ ဖုန်းဝင်လာတယ်။ ဆက်တိုက်ပဲ Production ကို Login လုပ်မရဘူးဆိုပြီး အကြောင်းကြားတဲ့ အီးမေးတွေ ဖုန်းတွေ ၀င်လာတယ်။ Mobile Application တွေမှာလည်း Software Update လုပ်မရဘူး၊ ဟိုဟာလုပ်မရ ဒီဟာလုပ်မရပါဆိုတဲ့ ဖုန်းတွေ ၀င်လာပြန်တယ်။ အလုပ်က ကျွန်မရဲ့ စီနီယာတွေမှာ တစ်ယောက်ကလွဲရင် ကျန်တဲ့သူတွေ အားလုံး မလေးရှား ရောက်နေတယ် ဆိုတော့ Application သာ ပြဿနာတတ်ပြီဆို တာဝန်ယူရှင်းရတော့မယ် ဆိုပြီး ခေါင်းပူသွားတယ်။ အနောက်မှာ ထိုင်နေတဲ့ တခြား Application ကို တာဝန်ယူထားသူစီလည်း ဖုန်းတွေ ၀င်လာလို့ဖြေနေသံတွေ ကြားလိုက်ရတော့ ကိုယ့် Application တစ်ခုထဲ ပြဿနာတတ်နေတာ မဟုတ်ဘူး သိလိုက်ရတယ်။ တော်ပါသေးတယ်။ ဒါနဲ့ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတာ ဖုန်းဆက်မေးလိုက်တော့ Network ပြဿနာတတ်တာတဲ့။ သူတို့ပြဿနာဆို ကိစ္စမရှိတော့ဘူး။ ကိုယ့်ပြဿနာမဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လေ။ ခဏနေတော့ Internal Backend Network Services မှာ ပြဿနာတတ်နေတဲ့ အတွက် Application အတော်များများ သုံးလို့မရဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ Staff အားလုံးနဲ့HelpDesk Centers တွေအားလုံးစီကို အကြောင်းကြားတဲ့ အီးမေးဝင်လာတယ်။ လာသမျှ ဖုန်းတွေကို Network Problem ဖြစ်နေလို့ဆိုတဲ့အကြောင်း ရှင်းပြနေရတယ်။ HelpDesk Centers ကလူတချို့ က အီးမေးမကြည့်ဘူး ထင်ပါတယ်။ နေ့ လယ်လောက်မှ Services တစ်ချို့ ပြန်ပြီး အလုပ်လုပ်ပေမယ့် တချို့ ဟာတွေ အလုပ်မလုပ်သေးတော့ ဖုန်းတွေ၊ အီးမေးတွေက ၀င်နေတုန်း၊ ပြန်ရှင်းနေရတုန်းပေါ့။ ညနေ ၅း၀၀ လောက်ကြတော့ အားလုံး အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတဲ့ အီးမေးဝင်လာတယ်။ တစ်နေကုန်နီးပါး ဆိုတော့ အဲ့ဒီက တာဝန်ရှိသူတွေ အထက်ပိုင်းကလူတွေကို ရှင်းလင်းချက်တွေ အတော်လေးပေးရမယ် ထင်တယ်။
အဲ့ဒီ ပြဿနာက တစ်ဖက်၊ နောက်ပြဿနာ တစ်ခုက တစ်ဖက်မှာ တက်လာတယ်။ ဒီညနေမှာ ဘာဏ်တစ်ခုအတွက် Application တစ်ခုရဲ့ release လုပ်ပေးစရာရှိတယ်။ ဟိုကလာသမျှ ဖုန်းတွေကို ရှင်းနေတုန်း ဒီဘက်က Business Analysis(BA) က သူရဲ့ UAT Offline မှာ Testing လုပ်နေတာ အမှားတစ်ခုတွေ့ တယ်။ Ciritical Problem တဲ့၊ ဒါကြီးနဲ့Prodcution လွှတ်လို့ မရဘူးတဲ့။ ကြည့်ပေးလို့လာပြောတယ်။ ကိုယ်က Deployment ပဲလုပ်တာ၊ အဲ့ဒီ code ရေးတဲ့သူအားလုံး မလေးရှား ရောက်နေတယ်။ အခုအမှားကို ပြင်နိုင်အုံးတောင်မှ SIT နဲ့UAT မှာ Server တွေမှာ အရင် စမ်းရမယ်။ ဟိုမှာ SIT နဲ့UAT Server တွေအားလုံးက Down နေတယ်။ BA က ဆက်ပြောတယ် အဲ့ဒီ ပြဿနာက နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်နေ့ က Testing လုပ်ထားတဲ့ record ရှိတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက မှန်တယ်၊ အခုမှ မှားနေတာဆိုတော့ Software ရဲ့ Deployment History ကို ပြန်ကြည့်ရတော့မယ်။ သူ User တွေကို ဘယ်လို့ ရှင်းရမလဲ၊ ကူညီပါတဲ့။ သူကလည်း သူ့ အထက် စီနီယာ ခွင့်သွားလို့အဲ့ဒီ application ကို တာဝန်ယူထားတာ။ နောက်ဆုံး ရွေးချယ်စရာ လမ်းမရှိတော့ ၆ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း Deployment လုပ်ထားသမျှ တစ်ခုချင်းစီကို CVS ထဲက version တွေကို reverse ပြန်လုပ်ပြီး စမ်းကြည့်ရတယ်။ Server/ Database တွေက down နေတော့ သာမန်လို မလွယ်ကူဘူးပေါ့။ နောက်ဆုံး အရင်က မှန်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ version အထိ reverse လုပ်ပြီး တဲ့ အချိန်မှာ ညနေ ၄ နာရီထိုးနေပြီ။ ဒါပေမယ့် အမှားက ရှိနေတုန်းပဲ။ ဒီနေ့ တော့ Production release မလုပ်နိုင်တာသေချာသွားပြီလေ။ အီးမေးတွေပို့၊ ဖုန်းတွေဆက်ပြီး deployment လုပ်မယ့် အစီအစဉ်တွေကို ဖျက်ရတော့တာပေါ့။ ကိုယ့်ဘက်က အမှားဆိုတော့ ချိုချိုသာသာလေးနဲ့အဆင်ပြေပြေလေးဖြစ်အောင် ပြောဆိုရတယ်။ မလွယ်ပါလားနော်။
ဘာမှားလည်းဆိုတာ ဒီနေ့ ရှာနိုင်မှ ဖြစ်မှာ။ မလေးရှားကို လိုက်မသွားပဲ ကျန်နေတဲ့ စီနီယာတစ်ယောက်က Coding တွေကို လာကူ ကြည့်ပေးတယ်။ သူက structure အကုန်သိနေတော့ တော်ပါသေးတယ်။ နောက်ဆုံး coding မှားတာ မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလူကလည်း ပြောတယ်။ နောက်ဆုံး တနည်းအနေနဲ့Procution Server ထဲမှာရှိနေတဲ့ ဒီရက်ပိုင်း ချိန်းလိုက်တဲ့ configuration files တွေနဲ့properties files တွေ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ယူပြီး UAT နဲ့SIT က files တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မှ propertie file တစ်ခုမှာ လွဲနေတဲ့အချက်တွေ တွေ့ ရတယ်။ CVS ထဲမှာ အဲ့ဒီ version ရှိမနေဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာ မေးဖို့ လဲ လူမရှိ၊ ကိုယ့်ဟာကိုပဲ ပြင်လိုက်ပြီး Testing လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ အဆင်ပြေသွားတယ်။ ညနေ ၆ နာရီက ထိုးတော့မယ်၊ BA ကလည်း ဒီနေ့ UAT အရောက်ပို့ ပေးပါလို့တဂျီဂျီ လာပြောနေတယ်။ SIT က ကိုယ်တာဝန်ယူတာဆိုတော့ ဘယ်အချိန် လုပ်လုပ်ရတယ်။ UAT က တခြား Department က Deployment လုပ်ပေးမှ ရတာဆိုတော့ ဖုန်းတစ်ချက် ဆက်ပြီး လုပ်ပေးနိုင်မလားလို့မျက်နှာချိုသွေး ချိုချိုသာသာလေး မေးရတယ်။ အခုပို့ ပေးမယ်ဆို လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။ စိတ်ကောင်းဝင်နေပုံပဲ။ မောင်မင်းကြီးသား ကျန်းမာပါစေ ဆုတောင်း၊ အမြန် ပြင်ဆင်စရာရှိတာ ပြင်ဆင်ပြီး package တွေ ပို့ ပေးလိုက်တော့ ချက်ချင်း deploy လုပ်ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီလူက ပြောသေးတယ်၊ သူမပြန်သေးပဲ စောင့်နေမယ်တဲ့။ Testing လုပ်ပါ၊ နောက်ထပ် ပြင်ဆင်စရာရှိရင် ထပ်ပို့ နိုင်ပါတယ်တဲ့။ တစ်နေ့ လုံး ကံဆိုးနေသမျှ ညနေပိုင်းလေးမှ ကံဇာတာတက်လာတာ ထင်ပါတယ်။ BA ၀င်ပြီး Testing လုပ်ရင် ကြာနေမှာ စိုးတာနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် Testing လုပ်ကြည့်တော့ အဆင်ပြေနေတာနဲ့ဖုန်းဆက်ပြီး ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောရတယ်။ ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီး နှုတ်ဆက်သွားတယ်။ အင်း ၇ နာရီ ကျော်ပြီဆိုတော့ သူတို့ လည်း ပြန်ချင်နေမှာပေါ့။ ကိုယ်ကတော့ မပြန်နိုင်သေးဘူး။ အီးမေး ၂၀ လောက် မဖတ်ရသေးတာ ရှိနေတယ်။ အီးမေးတွေ အမြန်ဖတ်ပြီး ချက်ချင်းရှင်ပေးနိုင်တာတွေကို ရှင်း၊ reply လုပ်စရာရှိတာတွေဆို reply လုပ်ရတယ်။ အဲ့ဒီ အီးမေးတွေ ပြန်ဖို့လူ ၄ ယောက်မှာ တာဝန်ရှိပေမယ့် ဒီနေ့ ကျွန်မ တစ်ယောက်ပဲ ရှိတဲ့အချိန်မှာ အီးမေး တစ်စောင်မှ မပြန်ပဲနေလိုက်ရင် မကောင်းဘူးလေ။ အိမ်ပြန်တဲ့အချိန်က ည ၈ နာရီနီးပါး ရှိနေပါပြီ်။
တစ်နေကုန် စိတ်ပင်ပန်းလာတော့ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ခေါင်းကိုက်နေပြီ။ ဒီခေါင်းကိုက်တာကလည်း အခုရက်ပိုင်း အဖြစ်များနေတယ်။ ဒီနေ့ တစ်နေ့ လုံး အလုပ်ရှုပ်ပြီး စိတ်ပင်ပန်းနေလို့ရေသောက်ဖို့ တောင် မေ့နေတယ်။ အချိန်မရဘူးလို့ ပဲ ပြောရမလား။ ဒီနေ့နေ့ လယ်ဆို သောက်နေကြ ရေနွေးကြမ်းတောင်သွားယူ မသောက်ဖြစ်ဘူး။ ထမင်းစားရင်း စာနည်းနည်းရေး၊ နောက်တော့ ရေအမြန်ချိုးပြီး တခြား ဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲ စောစော အိပ်ရာဝင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ တကယ့်ကို အလုပ်ရှုပ်တဲ့ နေ့ တစ်နေ့ ပါပဲ။
Posted by Nay Nay Naing at 11/13/2007 10:56:00 AM 11 comments
ဒီတစ်ပတ် အားလပ်ရက်မှာ ဘယ်မှမထွက်ဖြစ်ဘူး။ ထမင်းဟင်းတောင် ဟိုနေ့ က ၀ယ်ထားတာတွေနဲ့ ပဲ ချက်ပြုတ် စားဖြစ်တယ်။ နှစ်ရက်လုံး အွန်းလိုင်းကနေ Lecture တက်နေရတော့ အချိန်တွေ ဘယ်လို ကုန်သွားမှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး။ မသိသေးတာတွေ အတော်များများ သိလိုက်တဲ့ အတွက် အကျိုးရှိရှိ အချိန်တွေ ကုန်သွားတယ်လို့ ပြောနိုင်မယ် ထင်တယ်။ ဘာစာမှ မဖတ် ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့အားလပ်ရက်တွေ ကုန်နေတာ အတော်များနေပြီမဟုတ်လား။
စနေ နေ့ က မနက် ၁၀ နာရီလောက်ကနေ ညနေ ၃း၃၀ လောက်အထိ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ကတော့ မနက် ၁၁ နာရီလောက်ကနေ ညနေ ၅း၀၀ အထိ။ အဲ့လို စာမဖတ်တာကြာလို့ လားမသိဘူး၊ ထိုင်ရာမထ အာရုံစိုက်ပြီး နားထောင်ရတာ အတော် မလွယ်တဲ့ကိစ္စပဲ ဆိုတာကို သိလိုက်ရတယ်။ ဒါတောင် သက်သောင့်သက်သာ ကိုယ့်အိပ်ခန်းထဲက ကွန်ပြူတာရှေ့ မှာမို့တော်ပါသေးတယ်။ Lecture ခန်းထဲမှာ ၈ နာရီလောက် အတန်းတက်ရမယ်ဆို တွေးတောင် မတွေးရဲတော့ဘူး။ အခြေအနေပေးရင် ကျောင်းဆက်တက်ရင် ကောင်းမလားဆိုတဲ့ အတွေးကို အတွေးတစ်ခုအနေနဲ့ ပဲ ရပ်ထားဖို့စဉ်းစားနေပါပြီ။ ဒီနှစ်ရက်မှာ ညနေစောင်းလို့နားလို့ရပြီဆိုတဲ့ အချိန်တွေမှာ မခံမရပ်နိုင်အောင် ခေါင်းကိုက်နေတာ များတယ်။ ခေါင်းကိုက် ပျောက်ဆေး သောက်ပြီး အိပ်လိုက်မှ သက်သာရာရတဲ့ အခြေအနေ။ တစ်နေကုန်နီးပါး တတွတ်တွတ်ပြောဆို ရှင်းပြပေးရတဲ့လူတော့ ဘယ်လိုနေမလဲ မသိဘူး၊ ငြိမ်ငြိမ်လေး ထိုင်ပြီး နားထောင်ရသူ ကျွန်မတော့ အတော်ပင်ပန်းတယ်လို့ခံစားသွားရပါတယ်။ တခြားဟာတော့ မြန်မာရုပ်ရှင် နည်းနည်းလည်း ကြည့်ဖြစ်လိုက်တာပဲ ရှိတယ်။
ဒီတစ်ပတ် အားလပ်ရက်တွေဟာ စိတ်ညစ်စရာ ထွေထွေထူးထူးလည်း မကြုံတွေ့ ရ၊ အိပ်ရေး၀၀လည်း အိပ်ဖြစ်၊ အစားမှန်မှန် စားဖြစ်၊ အကျိုးရှိတာတွေ လုပ်ဖြစ်ပြီး၊ အရင်က ကျွန်မ မသိသေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အတော်များမျာကို သိလိုက်ရတဲ့အတွက် အကျိုးရှိတဲ့ အားလပ်ရက်တွေလို့ဆိုရပါမယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 11/12/2007 12:30:00 PM0comments
Centro would release in late 2008
နောက်ထပ် ဖတ်မိတဲ့ Microsoft ရဲ့ Software Release သတင်းတစ်ပုဒ်ပါ။
code-named "Centro" လို့အမည်ပေးထားတဲ့ Windows Essential Business Server (WEBS) ကို ၂၀၀၈ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ။ Beta version ကို ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ထွက်မယ်လို့ သိရတယ်။ ကွန်ပြူတာ အရေအတွက် ၂၅ လုံးကနေ ၂၅၀ အကြားရှိမယ့် အလယ်အလတ် ကုမ္ပဏီတွေကို ရည်ထုတ်တဲ့ အဲ့ဒီ Window Essential Business Server မှာ
Forefront Security for Exchange,
တွေပါဝင်မယ် ဆိုတဲ့ အကြာင်း သိရပါတယ်။ Standard Edition မှာတော့ နောက်အသစ်ထွက်မယ့် ISA Server ပါဝင်ပြီး Pemium Edition မှာ SQL Server 2008 ပါမယ်လို့ လည်း ပြောထားတယ်။
SQL Server ဆိုလို့Microsoft Platform မှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေ သူတို့အလုပ်တွေမှာ MS SQL 2005 ကိုပြောင်းမသုံးကြသေးပဲ MS SQL Server 2000 ကို သုံးတုန်းပဲလို့ ပြောတာကို သတိရမိတယ်။ အခု 2008 ထွက်တော့မှာဆိုတော့ ပြောင်းဖို့ လိုအပ်ရင်တောင် 2005 ကို မပြောင်းပဲ 2008 ကို တန်းပြောင်းကြမယ် ထင်တယ်။ ဒီအတိုင်းဆို MS SQL 2005 ဟာ သုံးသူနည်းပြီး ပျောက်သွားမယ် ထင်တယ်။ ကျွန်မ အထင်ပြောတာပါ။
WEBS မှာ တခြား Microsoft ရဲ့ ပါတနာ Product တွေဖြစ်တဲ့ CA, Citrix, Full Armor, Symantec, and Trend Micro တွေဟာ built add-ins အနေနဲ့ ပါဝင်ပြီးသားလို့ လည်း ဖတ်လိုက်ရတယ်။ WEBS ကို Intel နဲ့တခြား Hardware Partner တွေဖြစ်တဲ့ Fujitsu-Siemens, HP နဲ့ IBM မှာ run လို့ မယ်လို့ သိရတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ Server က 64-bit တစ်မျိုးထဲ အတွက် ထုတ်မှာလို့ သိရတယ်။ 2008 နောက်ပိုင်း ထွက်မယ့် Microsfot Server အားလုံးကို 32-bit အတွက်မထုတ်တော့ပဲ 64-bit တစ်မျိုးထဲအတွက် ထုတ်တော့မယ်လို့ လည်း ကြားမိပါတယ်။
Windows Essential Business Server အကြောင်း အသေးစိတ် ပိုပြီး သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအောက်က Links တွေမှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Windows Essential Business Server Overview & Screenshots
Widnow Small Business Server 2003
Posted by Nay Nay Naing at 11/11/2007 12:32:00 PM0comments
Microsoft Visual Studio 2008 & Open Source Code
ဒီနေ့Microsoft က Visual Studio နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းနှစ်ခုကို ဖတ်လိုက်ရတယ်။
1- Visual Studio 2008 နဲ့.Net Framework 3.5 ကို ဒီလကုန် ( end of november 2007 ) မှာ တရာဝင်ထုတ်မယ် ဆိုတဲ့ သတင်းပါ။ Visual Studio 2008 (Beta Version) ကို ဒေါင်းလုတ်လုပ် အသုံးပြုခွင့်ပေးနေတာတော့ လအတော်ကြာနေပါပြီ။ Beta Version ထွက်စ July လတုန်းက စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ပိုစ့်တစ်ခု (Visual Studio 2008 , .NET 3.5 reach Beta 2) ရေးဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။ ခုတော့ တရာဝင် ထွက်လာတော့မယ်ပေါ့။ Version အသစ်အသစ်တွေက ထွက်တာ မြန်သလားတော့ မမေးနဲ့ ။ အခု လက်ရှိ Studio 2005 သုံးနေသူတွေထဲက ဘယ်လောက် % လောက် 2008 ကိုပြောင်းသုံးကြမလဲမသိဘူး။
Source : Microsoft sets date for Visual Studio 2008
2- နောက်သတင်းတစ်ခုက ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်။ Visual Studio Source Code ကို Open လုပ်ပေးမယ် ဆိုတဲ့ သတင်းပါ။ အားလုံးကို ဖွင့်ပေးမှာတော့ မဟုတ်ဘူး။ Microsoft ရဲ့ Top Partners တွေကိုပဲ ဖွင့်ပေးမှာပါ။ debugging purposes အနေနဲ့ဖွင့်ပေးတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထားတယ်။ အဲ...licensing restriction ကိုလဲ ဖြုတ်ပေးမယ်တဲ့။ အရင်က Visual Studio development kit ကို Microsoft Platform မှာပဲ အသုံးပြုခွင့် ရှိတာပါ။ ခု အဲ့ဒီ ကန့် သတ်ချက်ကို ဖြုတ်လိုက်ရင် တခြားသူတွေက Visual Studio Application နဲ့extensions တွေကို တခြား OS တွေမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးသားနိုင်ပြီးလို့ဆိုထားတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ ဘာတွေဖြစ်ဦးမလဲတော့ စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပေါ့။
Source : Microsoft To Open Visual Studio Source Code to Top Partners
Posted by Nay Nay Naing at 11/08/2007 11:46:00 AM0comments
ခုတလော မြန်မာသီချင်းတွေပဲ နားထောင်ဖြစ်နေရာကနေ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အီးမေကနေ ပို့ ပေးတာနဲ့အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေ နားထောင်ဖြစ်သွားတယ်။ UK top 75 charts ထဲက သီချင်းတွေလို့ပြောပါတယ်။ ဒီနေ့နားထောင်ဖြစ်တဲ့ သီချင်းတွေထဲက တစ်ပုဒ်ကတော့...
Credit to P.J
Posted by Nay Nay Naing at 11/06/2007 10:39:00 PM2comments
မနေ့ ညနေက Tea Break မှာ လက်ဘက်ရည်သောက်လိုက်မိလို့အိပ်လို့ လည်း မပျော်၊ မောပြီး လူက တုန်တုန်ရင်ရင် ဖြစ်နေရတဲ့ အထဲ Amazing Picture ဆိုလို့ဘယ်လို ပုံမျိုးလဲဆိုပြီး သိချင်စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်မိတာ တစ်ခါတည်း ချာချာလည်သွားတယ်။ အဲ့လိုပုံတွေ အင်တာနက်ပေါ်မှာရော သူများပို့ တာတွေရော အများကြီးတွေ့ ဖူးပါတယ်။ ဒါမျိုးပုံတွေကို ကြည့်ရတာ လုံးဝ မကြိုက်ဘူး။ မျက်စိရှုပ်၊ ခေါင်းမူးတယ်။ မူးတဲ့ အရသာကို မကြိုက်လို့လူကို မူးစေနိုင်တဲ့ အရာ ဘာမှဆိုဘာမှ မလုပ်ပဲနေတယ်။
This is an example of the truth of "Seeing is deceiving."
ဒီနေ့ တော့ အိပ်မရတာနဲ့ဒီပုံက Animation မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောထားတာ မှန်မမှန် သေချာသိရအောင် စမ်းကြည့်ဦးမှဆိုပြီး မျက်လုံး တစ်ဝက်လောက်ပဲ ဖွင့်ပြီး ကြည့်လိုက်တော့ လှုပ်လှုပ်ရွရွတွေကို မတွေ့ ရ တော့ဘူး။ ပုံမှန်အတိုင်း မျက်လုံးအပြည့် ဖွင့် ကြည့်မယ်ဆိုရင် လှုပ်တာတွေ တွေ့ ပြီး မူးသွားမှာသေချာတယ်။ ဒီလိုပုံတွေက တကယ်ဆို ရွေ့ နေတာ မဟုတ်ပဲ ရွေ့ နေတယ်လို့အမြင်တွေမှားကြတာ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတာ သိချင်လို့ရှာဖတ်ကြည့်တော့ ဒီလိုရှင်းထားတာတွေ့ ရတယ်။ နောင်တချိန် ပြန်ရှာရလွယ်အောင် မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။
Explanation : Since we live ina3D world, our mind tries to converta2D object intoa3D one. In this optical illusion, we try to make sense of these 2D objects. The shading used is completely incongruous. The eyes lock ontoapart of the illustration that looks appropriately shaded but then find it disjointed with shading in other nearby areas. The eyes keep jumping around the drawing trying to map outa3-D solution that would make the shading illustration make sense, but it never seems to work.
Posted by Nay Nay Naing at 11/06/2007 01:29:00 PM3comments
Working on Sunday:7AM to5PM
Update: 05 November 2007
မနေ့ က ( 4th Nov 2007) မနက် ၇ နာရီက ညနေ ၅ နာရီလောက် အထိအလုပ်လုပ်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ခေါင်းအ၇မ်းကိုက်နေတယ်။ ရေမြန်မြန်ချိုးပြီး ဆေးသောက် အိပ်လိုက်ရတယ်။ တရေးနိုးမှာ သက်သာသွားလို့တော်သေးတယ်။ အဲ့လို ခေါင်းမကိုက်တာ အတော်ကြာနေပြီ။ အလုပ်ပင်ပန်းပြီး အအေးမိသွားတာကြောင့် ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ဒါနဲ့ခေါင်းကိုက်နေတဲ့ အချိန်မှာ အဆင်မပြေတဲ့ စကားတွေကြားရရင် ဘယ်လိုမှ သည်းငြီးမခံနိုင်ဘူး။ ပူညံပူညံအသံတွေ၊ ထေ့လုံးငေါ့လုံးတွေ မကြားချင်လို့တစ်ယောက်တည်း သည်းသန် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတာတောင် အဲ့ဒီအသံတွေက မလွတ်နိုင်ပါလားနော်။
မနေ့ က အလုပ်ကိစ္စတွေ ရေးမယ် စိတ်ကူးပေမယ့် ခုတော့ အသေးစိတ် ရေးချင်စိတ် မရှိတော့ပါ။ ဒါပေမယ့် ရှားရှားပါးပါး တနင်္ဂနွေ တစ်ရက်လုံး မနက် ၇ မှာ အလုပ်ရောက်အောင်သွားရပြီး တစ်နေကုန် အလုပ်ရှုပ်တဲ့ နေ့ ဆိုတာကိုတော့ မှတ်ထားလိုက်ဦးမယ်။ ပုံမှန် Release တွေဆို Deployment နဲ့Testing ပါ အပြီးအစီး ၅ နာရီလောက်ပဲ ကြာတတ်ပေမယ့် အခုဟာကတော့ v.2.33 ကနေ v.2.40 အသစ်ထုတ်တာဆိုတော့ Deployment က တစ်ရက် ( Sat - 3:00 PM to 8:30 PM) နဲ့Testing တစ်ရက် ( Sun : 7:00 AM to 5:00 PM) လုပ်လိုက်ကြရတယ်။ ဘာမှ ပြဿနာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မတတ် အားလုံးအဆင်ပြေပြေ ပြီးသွားတဲ့အတွက် ၀မ်းသာမိတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 11/04/2007 06:51:00 PM0comments
MySoJu : Watch Korean Dramas Online
ဒီနေ့ တော့ အွန်လိုင်း ရုပ်ရှင်ကြည့်နေကြ SSUpload မှာ ပြင်ဆင်မှု့တွေ လုပ်နေတာကြောင့် ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့မရတာနဲ့တခြား Online Site တစ်ခုမှာ Korea Movies တချို့ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မက Drama ဇာတ်လမ်းတွဲ အရှည်ကြီးတွေကို ကြည့်လေ့မရှိတာကြောင့် Movies လောက်ပဲ ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်ဖြစ်သလောက်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကိုရီးယား နဲ့ဂျပန် ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေပဲ ရှိတာဆိုတော့ တချို့ လူတွေတော့ ကြိုက်မယ် မထင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ကောင်းပြီး၊ Asian Movies ကြိုက်သူတွေအတွက်တော့ အပျင်းပြေစေမယ့် ဆိုဒ်တစ်ခုပါ။
MySoJu -Feeding your drama addiction...
Credit to KoBoyz
Posted by Nay Nay Naing at 11/04/2007 08:08:00 AM 1 comments
www.ifood.tv က မြန်မာ အစားအသောက် ဗီဒီယိုတွေ ကြည့် ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်က အစားအသောက် တွေကို အပြင်မှာ တကယ် စားဖို့အခွင့်အရေး မရနိုင်တောင်မှ အလွမ်းပြေလေး ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ကြည့်လို့ ရနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုမို့အသေအချာ မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာ ရှိနေတဲ့ အစားအသောက်တွေကတော့ အမျိုးအစား အစုံပါပဲ။
မြန်မာလမ်းဘေးမှ ခေါင်းရွက် ဗျက်ထိုးဈေးသည်များ
နံနက်ခင်းများတွေ စားလေ့ရှိသော အစားအစားများ ၁
နံနက်ခင်းများတွေ စားလေ့ရှိသော အစားအစာများ ၂ (အီကြာကွေး၊ ပဲပြုတ်နံပြား)
မြန်မာဘူဖေးစားသောက်ဆိုင် မှ အစားအစာများ
စမူဆာသုတ်၊ ဆိတ်သားကပတ် ၊ ဘယာကြော့်
ဘုရားပွဲမှ မုန့် လင်မယား
ဒီထဲက ဗီဒီယိုအများစုကိုကြည့်ရတာ အစားအသောက်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အစားအသောက်တွေ မှာထားပြီးတဲ့ခါ ဈေးရောင်းသူက ကိုယ့်အတွက် ပြင်ဆင်ပေးနေတာကို ဘေးက စောင့်ကြည့်နေရသလို ခံစားချက်မျိုး ရတယ်။ ပြင်လို့ ဆင်လို့ ပြီးတာနဲ့့ ကိုယ့်အတွက် ပန်းကန်လေးကိုယူပြီး စားရတော့ မလိုလို၊ သူပေးတဲ့ အထုတ်လေးဆွဲယူ ထွက်သားရတော့ မလိုလို ခံစားရတယ်။
Credit to original uploader meemalee and Ma C.cube from NativeMyanmar
Labels: Food, Myanmar, WebSite
Posted by Nay Nay Naing at 11/03/2007 11:14:00 AM3comments
Oh, little dove! Fly where you have to.
Oh, little dove! Fly where you have to. Fly where you have to.
my dove… where to
never tired are you?
in the open wild,
flames and painful cries.
my dove… what then
can you ever do?
All songs of peace
non-stop, I’ll coo.
my dove,… know you
the dangers notafew?
I do but I don’t flinch
so I dare go through.
my dove,…oh what
makes you steadfast?
If for peace, for life,
then it’sa.. “Must”.
[Oh, little dove! Fly where you have to]
Posted by Nay Nay Naing at 11/01/2007 11:25:00 PM5comments
Posted by Nay Nay Naing at 11/01/2007 07:20:00 AM0comments